मधुमेहका रोगीका लागि भान्सामा पाइने ४ औषधि !! | सुदुरपश्चिम खबर
मधुमेहका रोगीका लागि भान्सामा पाइने ४ औषधि !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : ११ पुष २०७८ ०५:५४
मधुमेहका रोगीले रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा आएन भने अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु आउने गर्छन् । विशेषज्ञले भान्सामा प्रयोग हुने केही मसलाहरुले खानाको स्वाद बढाउने मात्र होइन, शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोगलाई नियन्त्रण पनि गर्छ ।
विशेषज्ञका अनुसार मधुमेहको टाइप–२ को नियन्त्रणका लागि स्वस्थ जीवनशैलीले अहम भूमिका निर्वाह गर्छ । साथै, भान्सामा पाइने बेसार, दालचिनी, तुलसी जस्ता मसलाहरु मधुमेहका रोगीले नियमित सेवन गर्ने गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार बेसारमा करक्युमिन हुन्छ । जसले एन्टी–अक्सिडेन्टको रुपमा काम गर्छ । र, यसले मधुमेहको उपचारमा पनि मद्दत गर्छ । यसका साथै, बेसारमा एन्टी–इन्फ्लेमेट्री गुण हुन्छ । यसले मधुमेहको रोगीलाई राहत दिन्छ ।
मेथीको प्रयोग भान्सामा हुने गर्छ । यसको पातलाई सागको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भने मधुमेहका रोगीका लागि पनि यो लाभदायी हुन्छ । मेथीले पाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउने र काब्र्सलाई एब्जर्भ गर्ने क्षमतालाई तेज बनाउँछ । जसले गर्दा रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण हुन्छ । यसका साथै, कोलेस्ट्रोल कम गर्न मेथीको सेवन गर्नेुपर्छ ।
तुलसीले रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्छ । यसले शरीरलाई मजबुत बनाउँछ । विशेषज्ञका अनुसार तुलसीले रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्छ । तुलसीमा पाइने एन्टीअक्सिडेन्टले अक्सिडेटिभ स्ट्रेस कम गर्छ र मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ । रातोपाटी बाट सभार